Fiaraha-miasa amin’ny any ivelany : Manohana ny fanavaozana ny « Royaume Uni »
Manao tohivakana ny fitsidihana ara-pomba fanajana ataon’ireo Masoivoho vahiny eto Faravohitra. Androany Talata 09 Novambra 2021, dia ny Masoivohon’i « Royaume Uni », SEM David William ASHLEY no nitsidika ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza.
anjona iraisana ny fanavaozana, ka tafiditra ao ny fanatsarana sy fanafainganana ny fomba fiasa eo anivon’ny Fitsarana. Eo ihany koa ny raharaha maika ho an’ny vahoaka, toy ny ady tany. Raha ny fandraharahana ny fonja indray, dia ny lafiny fanajana ny Zon’Olombelona, ny fananganana fotodrafitrasa vaovao, ny fampanaovana asa famokarana ho an’ireo voafonja sy mitondra soa iombonana ho an’ny fiaraha-monina (travaux d’intérêt général).
Raha tsiahivina dia ny 10 Febroary 2021, no nanolotra tamin’Atoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara, ny taratasy manendry azy hiasa eto Madagasikara ny Masoivohon’i « Royaume Uni », SEM David William ASHLEY.
Nanararaotra nametraka fanontaniana tamin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, momba ireo raharaha hafa ireo mpanao gazety. Ohatra ny resabe momba ny tsy fahitana ireo voafonja miisa 32 tao Miandrivazo, ny fanaovana tombana isaky ny 6 volana ho an’ireo Mpitsara sy Lehiben’ny Fitsarana isan’ambaratongany, ary ireo mpanao politika migadra.
Atolotra misesy ireo fanazavana entin’ny Masoivohon’i « Royaume Uni », SEM David William ASHLEY momba ny votoatin’ny fitsidihany, arahin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, Atoa IMBIKI Herilaza, momba ny fandraisany ny vahiny, sy ireo valim-panontaniana ho an’ireo mpanao gazety.
← Fanajana ny zon’olombelona : Fiofanana 4 andro ho an’ny Mpandraharahan’ny Fonja miisa 30
Fiarovana ny fampiasam-bola : Noraisin’ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana ny avy ao amin’ny GEM →